Nampisavorovoro Ireo Mpanara-Dia Azy An-tapitrisany Ny Fanamelohana Ilay Mpitondra Fivavahana Indiana Ho Nanao Fanolanana · Global Voices teny Malagasy
Nampisavorovoro Ireo Mpanara-Dia Azy An-tapitrisany Ny Fanamelohana Ilay Mpitondra Fivavahana Indiana Ho Nanao Fanolanana
Voadika ny 04 Septambra 2017 4:20 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Ελληνικά, English
Gurmeet Ram Rahim Lehiben'ny Fivavahana Dera Sacha Sauda. Pikantsarin'i Siddharth Kannan tao amin'ny lahatsary YouTube.
Mitory fampianarana ara-panahy, ara-pinoana ary filozofika ao India ny ‘gurus‘ (mpampianatra ara-pivavahana) maro sy ny ‘babas’ (manoka-tena ho masina ara-tsaina sy ara-batana). Mahazo laza tokoa ireo sasany izay miantso ny tenany ho ‘olon'andriamanitra’ rehefa mambabo ny fon'ireo mpanaradia azy ary mampitombo ny mpankafy azy ifotony amin'ny alalan'ny fifandraisana ara-psikolojika lalina izay manome fampiononana, fankaherezana ary fikambanana.
Tamin'ny zoma 25 Aogositra, nomelohin'ny fitsarana manokana tao amin'ny Biraon'ny Fanadihadiana misahana ny Heloka Bevava (CBI) ilay mpitarika mpampisara-tsaina ny miresaka momba azy antsoina hoe Gurmeet Ram Rahim, mitarika ilay sekta goavana malaza Dera Sacha Sauda tamin'ny raharaha fanolanana miisa roa. Efa tao amin'ny fitsarana ireo raharaha ireo hatramin'ny taona 2008 rehefa nisokatra ny fanadihadiana nataon'ny CBI tamin'ilay lehiben'ny Dera Sacha Sauda. Niseho ny vehivavy roa nandritra ny famotorana ary niampanga an'i Gurmeet Ram Rahim ho nanao fanolanana. Nijanona tao amin'ny fitsarana manokana CBI anefa ny raharahan'izy ireo nandritra ny folo taona teo.
Iray amin'ireo fivavahana lehibe indrindra any India ny Dera Sacha Sauda, manana mpanjohy fototra miisa 3 tapitrisa eo ho eo. Raha malaza indrindra ao amin'ny fanjakan'i Haryana sy Punjab ao India ity fivavahana ity dia nanambara ny tenany ho fikambanana ara-tsosialy sy ara-panahy izay tarihan'i Gurmeet Ram Rahim amin'izao fotoana izao, ilay miantso ny tenany ho ‘Masina Ara-panahy’. Fantatra amin'ny fomba fiakanjony marevaka sy tamin'ny filalaovany sarimihetsika miisa roa mitondra ny lohateny hoe “Messenger of God” [Irak'Andriamanitra] ihany koa i Rahim, izay avy any amin'ny tanànakely iray ao amin'ny fanjakan'i Rajasthan.
Raha nankany amin'ny fitsarana ity mpitarika ny Dera Sacha Sauda ity mba hihaino ny didim-pitsarana tao Panchkula niaraka tamin'ny fiara miisa 700, dia nifamory teny an-dalamben'ny Haryana sy Punjab ny mpanaradia azy an'arivony mba hanohana ny ‘ olon'andriamaniny.’ Nofoanan'ny manampahefana ny fiara fitateram-bahoaka sy ny fiaran-dalamby maro, nohamafisina ny fitandroana ny filaminana, ary nakatona mialoha ny birao maro noho ny mety hisian'ny fivadihan-javatra mahatsiravina. Niha-nafana sy nisafotofoto ny toe-draharaha tany amin'ireo firenena avaratra roa ireo ora vitsivitsy talohan'ny nanambarana ny didim-pitsarana. Ary vao mainka nivadika nahatsiravina ny toe-draharaha taorian'ny namoahan'ny fitsarana ny didim-pitsarana. Nanao hetsi-panoherana feno herisetra ireo mpanohana ary nitarika fifandonana mahery vaika tamin'ny mpitandro filaminana ka voatery tsy maintsy nampiharin'ny manampahefana ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina tao amin'ny faritra Panchkula. Olona maherin'ny 30 no maty ary maro hafa no naratra.
Anand Mohan, mpitati-baovao avy ao amin'ny Indian Express, nisioka hoe:
A train bogey set on fire at Anand Vihar railways station. #Deraviolence#RamRahimConvicted@IndianExpresspic.twitter.com/j7Cm38Ts98
— Anand Mohan (@mohanreports) August 25, 2017
Fiaran-dalamby nirehitra tao amin'ny garan'i Anand Vihar.
Olom-pirenena maro sy olo-malaza no nanameloka ireo hetsika feno herisetra ireo tao amin'ny media sosialy ary nanohana ny didim-pitsarana.
Hoy i Arun Sharma raha naneso hoe:
I live in a country where Babas and Maulvis have more impact on people than Education.#Deraviolence
— Arun Sharma 🇮🇳 (@arunn333) August 26, 2017
Miaina eto amin'ny firenena iray izay ahitana an'i Babas sy Maulvis manana fiantraikany bebe kokoa amin'ny olona noho ny Fanabeazana aho.
Nisioka ilay mpilalao sarimihetsika Bollywood, Twinkle Khanna hoe:
Our fault Babas exist as we turn towards them like silly sunflowers looking for the sun,forgetting that a halo is just a trick of the light!
— Twinkle Khanna (@mrsfunnybones) August 26, 2017
Fahadisoantsika raha misy ny Babas itodihantsika tahaka ny voninkazo tanamasoandro adala mitady masoandro ary manadino fa fitaky ny hazavana fotsiny ny halo (avana manodidina ny masoandro)!
Nisioka hoe i Ajay Kadian:
Now add ‘Rapist’ too in your bio 😂 #RamRahimVerdict #RamRahimVsLaw #RamRahim #RamRahimVsLaw #RamRahimVerdic #GurmeetRamRahimSingh pic.twitter.com/ewBb02v7uy
— Ajay Kadian 🇮🇳 (@AjjayKadian) August 25, 2017
Ankehitriny ampio hoe mpanolana amin'ny mombamomba anao
Nisioka ilay mpanao sariitatra Satish Acharya hoe:
Blind Faith! #cartoon#DeraSachaSauda#GurmeetRamRahimSinghpic.twitter.com/uwP91bJ6ay
— Satish Acharya (@satishacharya) August 29, 2017
Ny alatsinainy 28 aogositra, nambaran'ny fitsarana ny sazy feno 20 taona, 10 taona avy isaky ny heloka, ary lamandy 14 lakh Indian rupees (eo amin'ny 21 900 dolara amerikana eo). Vao mainka nitombo ny korontana taorian'ny fanambarana.
Niampanga ny fampahalalam-baovao ho tsy namoaka ny zava-dehibe amin'ny fanamelohana i Amit Dholakia:
Hindi front pages: In Ram Rahim headlines, the missing word was ‘rape’ https://t.co/ZJFsdv5HRB via @scroll_in
— Amit Dholakia (@Amit_Dholakia) August 29, 2017
Lohatenin-gazety Hindi: Momba an'i Ram Rahim, tsy voalaza ny teny hoe ‘fanolanana’
Naneho ny hafaliany mangina ny hafa, toa an'i Yogendra Yadav, noho ny didim-pitsarana:
Done. Finally, 18 yrs after rape, 10 yrs of trial.
Now ensure that he serves his sentence as a prisoner, not as VIP in hospital & on parole. https://t.co/BM8dqqjvLY
— Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) August 28, 2017
Vita ihany ny farany, 18 taona taorian'ny fanolanana, fitsarana nandritra ny 10 taona.
Hojerena sisa raha toa ka manefa ny saziny toy ny gadra rehetra izy, fa tsy toy VIP any amin'ny hopitaly na afaka noho ny fampanantenana.
Samy nanararaotra ity tranga ity avokoa na ny antoko politika Bharatiya Janata Party (BJP) na ny antoko mpanohitra Kongresy Nasionaly Indiana (INP). Niampanga ny BJP ho manao fifamatorana ara-politika akaiky amin'i Gurmeet Ram Rahim ny INP raha ny BJP kosa milaza fa henjana loatra ny didim-pitsarana saingy mangingina ihany izy ireo.
Nomena tsiny tamin'ny tsy firaharahiana loatra nifehy ny fiarovana ny Sefo Minisitr'i Haryana ary nanambara kosa ny Sefo Minisitr'i Punjab fa tsy hisy ny fanonerana ho an'ireo mpanaradia naratra nandritra ny hetsi-panoherana nahery vaika nanerana ny fanjakana. Nanameloka ny herisetra nandritra ny fandaharany tao amin'ny onjam-peo isan-kerinandro ny Praiminisitra Indiana Narendra Modi. Nahitana herisetra mahery vaika tany Uttarakhand, ilay fanjakana miankandrefana tonga any Haryana, ary nanery ireo manampahefana hampihatra ny andininy faha-144 tamin'ny Fehezan-dalàna Famaizana Heloka Bevava (CrPC) tamin'ny taona 1973, mba handrarana ny famorian'olona miisa dimy na mihoatra tao amin'ny faritra.
Mandritra izany fotoana izany, mbola miatrika fiampangana heloka bevava miisa telo hafa ilay mpitarika fivavahana Gurmeet Ram Rahim , anisan'izany ny vono olona sy ny voalaza fa fanalana taovam-pananahan'ireo mpanara-dia Dera miisa 400 tao amin'ny foiben'ny sekta.
Tohina tamin'ny fiampangana an'i Rahim, mbola mijanona eny an-dalambe ireo mpanara-dia ny Dera Sacha Sauda izay mampanontany tena hoe iza no tena hinoan'izy ireo amin'izao fotoana izao.
4 andro izayIndia
1 herinandro izayNepal
23 Jona 2021Nepal